कोरोनासंग लड्न डरचिन्ता होइन, आत्मबल चाहिन्छः डा कार्की – Nepalilink
कोरोनासंग लड्न डरचिन्ता होइन, आत्मबल चाहिन्छः डा कार्की
कोरोना भाइरसको महामारीले अहिले सारा विश्व आक्रान्त छ । लाखौं मानिस संक्रमित बनेका छन्, दशौं हजारले ज्यान गुमाएका छन् । स्वास्थ्यमा मात्र नभएर कोरोनाले आर्थिक, सामाजिक क्षेत्रमा समेत ठूलो नोक्सानी पुरयाइरहेको छ । त्यस्तै, कोरोना महामारीले मानिसहरुमा तनाव, चिन्ता लगायतका मनोवैज्ञानिक समस्या पनि सिर्जना गराएको छ ।
कोरोना भाइरसको संक्रमणका कारण निम्तिएको महामारीले मानिसहरुमा पुर्याएको मनोवैज्ञानिक असर र यसलाई कम गर्ने उपायहबारे एक मनोचिकित्सकका रुपमा बेलायतको नेशनल हेल्थ सर्भिस (एनएचएस) मा झण्डै ४ दशक सेवा गरेका डा. चुडाबहादुर कार्कीसंग नेपाली लिंकले गरेको संवादः
कोरोना भाइरसको महामारीले मानिसहरुमा कस्तो मनोवैज्ञानिक असर पारिरहेको छ ?
अहिले कोरोना भाइरसको महामारी छ । जुनसुकै महामारी वा समस्याका बेला पनि हरेक मानिसले आफ्नो परिस्थिति र वातावरणअनुसार प्रतिक्रिया जनाउंछ । अहिले धेरै मानिस कोरोनाको संक्रमित बनेको, कतिले ज्यान गुमाइरहेको बेला सबै मानिसहरुमा स्वभावतः एक खालको चिन्ता र डर उत्पन्न भएको छ । आफ्नो घरबाट बाहिर निस्किन सहज छैन्, काममा जान सक्ने अवस्था छैन् । यसले गर्दा मानिसहरु दिक्क, फ्रस्टेटेड भइरहेका छन् ।
सबै ठीकठाक हुंदा पनि मलाई केहि नराम्रो भइहाल्छ कि वा मेरो परिवार, आफन्तलाई केहि हुन्छ कि भन्ने चिन्ता र हड्बडाहट मानिसहरुमा देखिएको छ ।
यस्तो महामारीको बेला पर्न सक्ने यी मनोवैज्ञानिक असरहरुलाई कसरी कम गर्न सकिन्छ ?
सबभन्दा ठूलो कुरा भनेको नै आफ्नो मनलाई बलियो बनाउनु हो । रोगबाट बच्न र आफ्नो स्वास्थ्यको सुरक्षा गर्न सावधानी त जरुरी हुन्छ नै । तर, अनावश्यक रुपमा डर र चिन्ता पाल्नुहुंदैन । यो रोगका लक्षणहरुबारे बुझ्न र आधारभूत कुरा थाहा पाउन सकियो भने पनि धेरै सजिलो हुन्छ । रोग लागिहाल्यो भने कसरी स्वास्थ्यसेवा लिने, कहां सम्पर्क राख्ने भन्ने जानकारी आवश्यक हुन्छ । आफ्नो मन र शरीर बलियो पार्ने हो भने रोगसंग डराएर आत्तिनुपर्ने हुंदैन ।
कतिपय मानिसहरु आशंकाकै भरमा पनि आत्तिने, डराउने गर्छन् । उनीहरुलाई के सल्लाह दिनुहुन्छ ?
यदि कसैलाई लक्षणहरु देखा परेको छ वा संक्रमण भएको आशंका छ भने घरमै बस्नुपर्छ । परिवारका अन्य सदस्यसंग पनि आवश्यक दूरी कायम गर्नुपर्छ । सरकारले जारी गरेको निर्देशिकाअनुसार सबै सावधानी अपनाउनुका साथै आफ्नो जिपी वा अस्पताललाई सम्पर्क गरेर परामर्श लिनुपर्छ । संक्रमण भइहालेको भएपनि निवारणको उपाय छ भनेर मन बलियो बनाउनुपर्छ । आफ्नो शरीरलाई तन्दुरुस्त राख्ने, आत्मबल बढाउने र डाक्टरहरुको सल्लाह, परामर्श लिने हो भने कोरानालाई जित्न सकिन्छ । डर र चिन्ता मात्रै गरेर त झन् स्वास्थ्य बिग्रिंदै जान्छ ।
मनमा अनावश्यक डर र नकारात्मक चिन्तन आउन नदिन के गर्न सकिन्छ ?
सोच सकारात्मक हुनुपर्छ । नकारात्मक चिन्तनलाई प्रोत्साहित गर्ने खालका कुराबाट टाढै रहने कोशिस गर्नुपर्छ । अहिले महामारीको समयमा धेरै मानिसहरुले दिन नै समाचारहरु हेरेर बिताउने गरेको देखिन्छ । समाचारमा मृत्यु, रोग र समस्या देखाइरहने कारण तनाव, चिन्ता बढ्ने सम्भावना रहन्छ । त्यसैले धेरै समाचार हेर्नुभन्दा बरु आफ्ना बांकी रहेका काम गर्ने, सौख पूरा गर्ने, राम्रा किताब पढ्ने, गीत सुन्ने, फिल्म हेर्ने, व्यायाम र योगाका लागि समय बढाउने, पूजापाठ गर्ने लगायतका सकारात्मक गतिविधिमा व्यस्त रहनु हितकर हुन्छ ।
संक्रमण भइसकेको अवस्थामा डर, लाज मान्ने र लुकाउने प्रवृत्ति कत्तिको हानिकारक छ ?
संक्रमण भयो भन्दैमा कुनै डर, लाज वा हिनताबोध गर्नु आवश्यक छैन् । सकेसम्म सावधानी अपनाउने हो, जसले गर्दा संक्रमण नै हुन नपाओस् । तर संक्रमण नै भइहाल्यो भने पनि सकारात्मक सोच राखेर राम्रो हेरविचार र औषधोपचार गर्न सके ठीक हुन्छ भन्ने आत्मविश्वास जगाउनुपर्छ । कोरोना जस्तो महामारीको संक्रमण लुकाउंदा आफ्नै परिवार र नजिकका अरुलाई पनि सर्ने जोखिम झन् बढ्छ । त्यसैले सूचना लुकाएर भन्दा आफ्नो परिवार र सम्पर्कमा रहनेहरुसंग शेयर गरेर सचेत बनाउने कोशिस गर्नुपर्छ । जसले गर्दा आफू बच्न मात्र होइन्, अरुलाई बचाउन पनि मद्दत हुन्छ ।